अत्यधिक कुशल Cannabidiol (CBD) क्यानाबिसबाट निष्कर्षण - हिल्सचर अल्ट्रासाउन्ड टेक्नोलोजी
हेलसिच अल्ट्रासोनिक निकायहरू राज्यको कलात्मक प्रविधि हुन् जब यो हेम र सीबीडी तेलहरूको विश्वसनीय र कुशल निकासीमा आउँछ। अल्ट्रासोनिकेशन वनस्पतिबाट बहुमूल्य यौगिहरु जारी गर्न अत्यधिक शक्तिशाली निकासी प्रविधिको रूपमा चिनिन्छ। अन्य निष्कर्षण तरिकाहरु जस्तै सुपर CO2 निष्कर्ष निकालन को तुलना मा, अल्ट्रासोनिक टेक्नोलोजी दक्षता, सरल संचालन र बहुमुखी उपयोग मा अधिक छ।
अल्ट्रासोनिक निकासी राम्रो तरिकाले जान्दछ र वनस्पति विज्ञान बाट बहुमूल्य यौगिक निकाल्न एक दीर्घकालिक स्थापित प्रक्रिया हो। यसैले, उच्चीकरणका लागि सीबीडी तेलहरू उत्पादन गर्न उपयुक्तिकरण हो। ठीक से नियन्त्रित अल्ट्रासोनिक cavitation द्वारा, रोपण कोशिकाओं को परावर्तित हुन्छ र विलायक को सेल मा धक्का दिइएको छ, जहां यसले इंस्रासेलुलल यौगिकहरु जस्तै कैनोबिनोइड्स, टिनपेन्स, फ्लावोनोइड आदि को अवशोषण गर्दछ।
अल्ट्रासोनिकेशनको ठूलो फाइदा तापमान दायरा हो, जसमा निकासी गर्न सकिन्छ। अल्ट्रासोनिक निष्कर्षण गर्म / ग्याँस इथेनॉलबाट क्रोगोजेन इथेनॉल (-70 डिग्री सेल्सियस) सम्म प्रदर्शन गर्न सकिन्छ। यसले वांछित यौगिहरूको लक्षित अलगावको लागि अनुमति दिन्छ। सोनक्कन क्रूजिनिक इथेनॉल उत्पादनमा मुख्य रूपले क्यानोबिनोइड्स र टेपेन्समा उत्पादन गर्दछ, जसमा फाइटकोमिकल यौगिकहरू (जस्तै एल्दाडेस, एस्टर्स, इथिल्स, केटोन्स) व्यापक विविधतामा एक गहिरो / हट इथेनॉल निष्कर्षण परिणाम। पूर्ण-स्पेक्ट्रम अङ्कहरूले क्यानोनोनोइड, ट्रेप र अन्य फाइटोकोमिकलको बहुतायत समावेश गर्दछ। उत्प्रेरक प्रभावको अनुसार, फाइटोकोमिकल्स (उदाहरणकोनाबिनोइनइड्स )सँग सामन्य प्रभावहरू छन् र त्यसका साथै अन्य वनस्पतिक रसायनहरू सँगसँगै काम गर्दछ। यसको अर्थ यो हो कि सीबीडी तेल जसमा CBD प्लस अन्य cannabinoids, terpenes र phytochemicals समावेश छ एक सीबीडी तेल सीबीडी सहित तेल को तुलना मा एकदम अधिक उच्च चिकित्सीय प्रभाव हुनेछ। तथापि, क्लोरोफिल निकासीबाट टाढाको कारणले गर्दा यसले निकासीको अप्रिय स्वाद दिन्छ।
अल्ट्रासोनिक निष्कर्षण: अल्ट्रासोनिक निकासी सजिलै ब्याच वा निरन्तर प्रवाह-मोड मोडमा प्रदर्शन गर्न सकिन्छ – तपाईंको प्रक्रिया भोल्युममा निर्भर गर्दछ। निष्कर्षण प्रक्रिया धेरै छिटो छ र उच्च मात्रामा सक्रिय यौगिकहरू उत्पन्न हुन्छ।
निस्पंदन: ठोस संयंत्र भागहरू तरलबाट हटाउनका लागि पेपर फिल्टर वा फिल्टर थरको माध्यमबाट बिरुवा-तरल मिश्रण फिल्टर गर्नुहोस्।
बहाव: विलायकबाट CBD तेलको विभाजनको लागि, सामान्यतया रोटर-वाष्पयोगकर्ता प्रयोग गरिन्छ। विलायक, उदाहरणार्थ इथानोल, पुनःप्राप्त र पुनः प्रयोग गर्न सकिन्छ।
नानो-पायसीकरण: सनकरणद्वारा, शुद्ध सीबीडीको तेल एक स्थिर नैनोमोलेशनमा प्रशोधन गर्न सकिन्छ, जसले उत्कृष्ट बायोव्वाइट प्रदान गर्दछ।
तपाईंको विस्तृत चरण-दर निर्देशन यहाँ डाउनलोड गर्नुहोस्!
Hielscher को अल्ट्रासोनिक निकायहरु लाई इष्टतम निष्कर्षण स्थितिहरु लाई ठीक तरिकाले ट्यूनिंग गर्न सकिन्छ – तपाईंको कच्चा माल (कन्नबिस पातहरु, कल्याण, भित्ता आदि) बाट उच्चतम मात्रा र गुणस्तर निकाल्दै। अल्ट्रासाउन्ड तीव्रता महत्त्वपूर्ण छ जब यो वनस्पति यौगिहरु को निकासी को लागी आउछ जस्तै कैनबिस देखि उच्च गुणवत्ता वाला सीबीडी तेल। हाम्रो अल्ट्रासोनिक्स UP400St, UIP500hdT, UIP1000hdT र UIP2000hdT सटीक आयाम नियन्त्रण, तापमान सेन्सर र समय नियंत्रण संग इष्टतम परिस्थितियों को तहत संचालन को अनुमति को लागि सुसज्जित हो। रंगीन टच स्क्रिन र ब्राउजर नियन्त्रणले सरल र विश्वसनीय निरीक्षण गर्न र सञ्चालन गर्दछ।
120L अल्ट्रासोनिक ब्याच सीबीडी भांग को UIP2000hdT र आंदोलनकर्ताको साथ
UP400St कन्नबिनोबाट क्यानोनोनोइड्स को निकासी को लागि
इथानोल कोनेनोनोइड्स को निकासी को लागि व्यापक रूप मा प्रयोग गरिन्छ। हेलसिचको अल्ट्रासोनिक्सले तपाइँको सव्वलनको चयनलाई सामान्य रूपमा खोल्दछ: पानी-इथेनॉल मिश्रण, क्रियोजेनिक एथानोल, इथेनॉल, ओभर-प्रफिन रक्सी, ग्लिसरीन आदि।
इथानोल एक धेरै लोकप्रिय विलायक हो किनभने इथानोलले ध्रुवीय (हाइड्रोफिलिक) र न्युपोलिल (हाइड्रोफोबिक / लिपोफिलिक) पदार्थहरू दुवैलाई भंग पार्छ। इथेनॉल / पानी को विभिन्न अनुपात मा मिश्रण को अल्ट्रासोनिक निष्कर्षण को लागि पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। इथेनॉल / पानीको फाइदा कम लागत (कम इथेनॉलको कारण) र कम ज्वलनशील देखि अधिक सुरक्षा समावेश गर्दछ। क्र्रोगेनिक इथेनॉल (लगभग -70 डिग्री सेल्सियस) को साथ अल्ट्रासोनिक निष्कर्षण धेरै उच्च उपज र गुणस्तर प्रदान गर्दछ।
हाम्रो अल्ट्रासोनिक उपकरणहरू इष्टतम प्रयोगकर्ता-मित्रताका लागि डिजाइन गरिएका छन्, यस अर्थमा हाम्रो अल्ट्रासोनिक निकायहरू सजिलो र सुरक्षित रूपमा सञ्चालन गर्न सकिन्छ। हामी हाम्रो ग्राहकहरु लाई सेटअप को समयमा सहायता र अल्ट्रासोनिक सेटिंग र मापदंडों को बारे मा सिफारिशहरु लाई दिन को लागि खुशी हो। हामी तपाईंलाई सबैभन्दा उपयुक्त उपकरण प्रदान गर्दछौं – ब्याच र इनलाइन प्रशोधनका लागि।
लाभ अधिक CO2 निकासी
Supercritical CO2 निकाय महंगा र खरीद गर्न महँगो छन्। CO को सञ्चालन2 निकासी जटिल छ र इच्छित क्यानोबिनोइड्स र टेस्पेसहरू प्राप्त गर्न को लागी उपयुक्त हुन सक्छ जो एक विशेषज्ञलाई थाहा छ। उच्च दबाव र उच्च तापमान पारंपरिक तरल निकासी को तुलना मा लागत मा वृद्धि मा महत्वपूर्ण योगदान। तुलनामा, अल्ट्रासोनिक निष्कर्ष खरिद गर्न र चलाउन सस्तो छ, उच्च निकासीमा उपज, जुन केहि मिनेट भित्र प्राप्त हुन्छ। चूंकि sonication परिवेश (या थोडा ऊँचाई) मा प्रदर्शन र कम तापमान, अल्ट्रासोनिक निष्कर्षण सरल र संचालित गर्न सुरक्षित छ। हेलस्चरको अल्ट्रासोनिक निष्कर्ष पहिचान गरिन्छ र उनीहरूको उच्च निष्कर्षण दर, विभिन्न सल्विन्टहरू, सजिलो प्रयोग र रैखिक स्केलेबिलिटीको प्रयोगको लागि रुचाइएको छ।
उच्च बायोव्वाटटिभ र सीबीडीको उत्कृष्ट प्रभाव प्राप्त गर्न, नानोआफर्ममा सीबीडी तेलको खपतहरू व्यवस्थापन गरिनुपर्दछ।
हेल्सेचरको अल्ट्रासोनिक यन्त्रहरूको सुन्दरता उनीहरूको बहुमुखी उपयोगमा छ: हाम्रो अल्ट्रासोनिक प्रणाली क्यान्सिस निकासीको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ र नानोमोल्सनको उत्पादन। तपाईं कैनबिसबाट CBD निकाल्न र सीबीडी तेल प्रक्रिया स्थिर र उच्च bioavailable नैनोमोलेशनमा पछि लाग्न केवल एक उपकरण किन्न चाहन्छ।
यहाँ क्लिक गर्नुहोस् CBD को अल्ट्रासोनिक nanoemulsification को बारेमा थप जान्न!
Hielscher अल्ट्रासोनिक्स कैनबिस निकासी को लागि अल्ट्रासोनिक निष्कर्षण उपकरण को आपूर्ति र नैनो-फार्मूलेशन को पायसीकरण।
तिनीहरूको सटीक नियन्त्रण योग्यता र प्रयोगकर्ता-मित्रता बाहेक, हाम्रा सबै अल्ट्रासोनिक उपकरणहरू २//7 अपरेशनको लागि निर्मित छन्। हाम्रो प्रणालीहरू कम देखि धेरै उच्च आयामसम्म वितरित गर्न सक्षम छन्। क्यानाबिनोइड्स र टर्पेनेस निकाल्नका लागि हामी विशेष अल्ट्रासोनिक सोनोट्रोड्स (अल्ट्रासोनिक प्रोब वा सीs पनि भनिन्छ) प्रदान गर्दछौं जुन उच्च-गुणस्तरको सक्रिय पदार्थहरूको संवेदनशील अलगावका लागि अनुकूलित छन्। हाम्रो सबै प्रणालीहरू लिनका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ cannabinoids को पछि र पायसीकरण।
आज हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्! हामी तपाईंको निष्कर्षण आवश्यकताहरु को लागि सबै भन्दा उपयुक्त अल्ट्रासोनिक सेटअप को सिफारिश गर्न को लागी खुशी छ!
Brenneisen आर। (2007): रसायन विज्ञान र Phytocannabinoids को विश्लेषण र अन्य क्यानाबियस क्षेत्रहरु। यसमा: एलोहोली एमए (एड्स) मारिजुआना र क्यान्यानोनोइड्स। फोरेंसिक विज्ञान र चिकित्सा।
अल्ट्रासाउन्ड एक्सटेक्सनको लाभ
अल्ट्रासोनिक निष्कर्ष ध्वनिक को सिद्धान्त मा आधारित छ cavitation। काभेटेशन तरलमा उच्च प्रदर्शन अल्ट्रासाउन्डको परिणामको रूपमा देखा पर्दछ र ऊर्जा-घने मेकानिकल प्रभावहरू द्वारा विशेषता प्राप्त गर्दछ, जुन तथाकथित तातो-स्पटहरूमा ठाउँ लिन्छ।
अल्ट्रासोनिक निकासी – काभिटेशनल प्रभावहरू
जब पावर अल्ट्रासाउंड तरंगहरू तरलमा जोडी हुन्छन् (उदाहरणका लागि निलम्बनमा बोटानिकल सामग्री समावेश गरिएको निलम्बन), अल्ट्रासोनिक तरंगहरू तरलको माध्यमबाट यात्रा गर्दछ जसले उच्च दबाव / कम-चक्र चक्रलाई बदल्दछ। कम दबाव चक्रको बखत, मिनेट भ्याकुम बुलबुले (तथाकथित cavitation बुलबुले) सिर्जना गरिन्छ, जुन धेरै दबाव चक्रहरूमा बढ्छ। एक निश्चित आकारमा, जब बुलबुले अधिक ऊर्जा लिन सक्दैनन्, तिनीहरू उच्च-चक्रको चक्रको क्रममा हिंस्रक रूपमा घुम्छन्। बबल प्रकोप तीव्र cavitational शक्तिहरू द्वारा दर्शाईन्छ, माइक्रो-टर्बुलेन्स र तरल स्ट्रिमहरू सहित १००m / s को वेगको वेगको साथ। यी cavitational कतर प्रभावहरू Sonomechanical प्रभाव पनि भनिन्छ। बायोएक्टिव अणुहरूको अल्ट्रासोनिक निकासी मुख्यत: सोनोमेकेनिकल प्रभावहरूको कारणले हुन्छ।
अल्ट्रासोनिक cavitation को परावर्तनीय अवस्थाहरू पर्ववर्ती र / वा सेल पर्खालहरू र झिल्लीहरू अवरोध गर्दछ र नमूनामा विलायकको ठूलो प्रवेश सक्षम पार्छन्। यसैले अल्ट्रासोनिक निष्कर्ष प्राप्त गर्दछ यौगिकहरु को एक धेरै तेजी देखि अलगाव – छोटो प्रक्रिया समय, अधिक उपज, र कम तापक्रममा परम्परागत निकासी विधिहरू प्रदर्शन गर्दै। एक हल्का (Sono-) मेकानिकल उपचार को रूप मा, अल्ट्रासाउन्ड निकाल्ने bioactive यौगिकहरु को थर्मल गिरावट रोक्छ र परम्परागत विलायक निकासी, hydrodistillation, वा Soxhlet निकासी, जो गर्मी-संवेदनशील अणुहरू विनाश गर्न को लागी ज्ञात को रूप मा अन्य प्रविधि outperforms। यी सुविधाहरूले बोटानिकलहरूबाट तापमान-सम्वेदनशील सक्रिय यौगिकहरूको विमोचनको लागि अल्ट्रासोनिक एक्स्ट्र्यासनलाई मनपर्ने प्राविधिक बनाउँछ।
तसर्थ अल्ट्रासोनिक एक्स्ट्र्याक्सन जैविक क्रियाशील अणुहरू जस्तै पॉलीफेनल्स, टर्पेनेस, आवश्यक तेल र क्यानाबिनोइडहरू बोटबिरुवा सामग्रीबाट निकाल्नको लागि रुचाइएको प्रविधि हो।
अल्ट्रासोनिक cavitation को परावर्तनीय अवस्थाहरू पर्ववर्ती र / वा सेल पर्खालहरू र झिल्लीहरू अवरोध गर्दछ र नमूनामा विलायकको ठूलो प्रवेश सक्षम पार्छन्। यसैले अल्ट्रासोनिक निष्कर्ष प्राप्त गर्दछ यौगिकहरु को एक धेरै तेजी देखि अलगाव – सानो प्रक्रियाको समय, उच्च उपज, र कम तापमानमा पारंपरिक निष्कर्षण विधिहरू बढाउने। हल्का मेकानिकल उपचारको रूपमा, अल्ट्रासाउन्ड निकासी बायोटेक्टिव यौगिकहरूको थर्मल गिरावट रोक्छ र अन्य प्रविधिहरू जस्तै पारंपरिक विलायक निकासी, हाइड्रोडसिलेशन, या सोक्सहालेट निष्कर्षणबाट बाहिर निस्कन्छ, जुन गर्मी-संवेदनशील अणुहरू हटाउन जान्छ। यी फाईलहरूले botanicals बाट तापमान-संवेदनशील सक्रिय यौगिहरूको रिलीजको लागि अल्ट्रासोनिक निकासीलाई प्राथमिकतात्मक बनावट बनाउँछ।
क्यानाबिनोइड्स प्राकृतिक रूपमा क्यानाबिस स्याटिवा प्लान्टमा फेला परेका यौगिकहरू हुन्। त्यहाँ भांगको बोटमा 480० भन्दा बढी विभिन्न यौगिकहरू छन्। भांग (जसलाई मारिजुआना पनि भनिन्छ) एक असाधारण शक्तिशाली औषधी जडीबुटी। उपचारात्मक सक्रिय यौगिकहरूको विस्तृत विविधता मध्ये, 85 85 फाइटोकेमिकल्सलाई क्यानाबिनोइड्स भनिन्छ (र अधिक पत्ता लगाउन सकिन्छ)। सीबीडी र टीएचसी (टेट्राहाइड्रोकानाबिनोल / Δ--THC) सबैभन्दा प्रख्यात क्यानाबिनोइडहरू हुन्। सब भन्दा महत्त्वपूर्ण छुट्याउने विशेषता CBD गैर- psychotropic हो, जबकि THC psychoactive प्रभाव देखाउँदछ।
क्यानोनिनोइड मनोरञ्जन र मेडिकल कारणहरूको लागि खपत गरिन्छ।
CBD को फार्माकोकोइनेटिक डाटा:
bioavailability – मौखिक: 13-19%, घुसिएको: 11-45% (अर्थ 31%)
उन्मूलन आधा जीवन:9घण्टा
संयुक्त राज्य अमेरिका मा, सीबीडी उत्पादनहरु जसको कम से कम .03% THC हो, जो बीउ वा औद्योगिक गोर्खा को बिरुवा देखि निकाल दिए हो, फेडरलिय कानूनी हो र यसको कानूनी कानूनों को बावजूद, सबै राज्यों मा कानूनी रूप देखि खरीदा जा सकता हो।
THC को फार्माकोकोइनेटिक डाटा:
bioavailability – मौखिक: 6-20%, घुसिएको: 10-35%
उन्मूलन आधा-जीवन: 1.6-59घण्टा, 25-36 घण्टा (मौखिक प्रशासित ड्रोनबिनोल)
नैनो-क्यानिनोनोइड्स एक नैनो आकारको तेल-पानी पायलोनमा निर्मित कैनबिस तेल हुन्, जसले उच्च बायोव्वाईट्युट (छिटो उठाउने र स्वास्थ्य प्रभाव बढाउँछ) प्रदान गर्छ र यसैले कम खुराकमा व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। यसबाहेक, कैनबिस नैनोमोमुलेन्सले औषधी उत्पादन, पेय पदार्थ, edibles, र कस्मेटिक उत्पादनहरू (जस्तै क्रीम, लोशन) मा सजिलै संग मिश्रण गर्न सकिन्छ। चूंकि नैनो-इमुलेशन प्रायः पारदर्शी हुन्छन्, उनीहरूले सजिलै अन्य उपस्थितिमा सजिलै सजिलै सजिलै प्रभावित गर्न सकिन्छ।
उच्च गुणस्तर नैनो-इम्युसन प्राप्त गर्न, बूप्लेट आकार, र पोलिडोस्पर्सिटी इन्डेक्स (पीडीआई), महत्त्वपूर्ण तत्वहरू छन् जुन पर्याप्त मात्रामा नानोमोमुलेन्सको स्थिरतालाई प्रभाव पार्छ। उच्च polydispispity सूचकांक ठूलो बूंदों को अस्तित्व को इंगित गर्दछ, जो कोइलासेंस र ओस्टवाल्ड पकड को माध्यम ले पाश को अस्थिरता गर्दछ। यसैले सानो र संकीर्ण बूलेट आकार वितरण स्थिरता र (नैनो / माइक्रो-) पायसन को एक लामो शेल्फ जीवन को लागि एक महत्वपूर्ण योगदान कारक हो।
क्यान्बिस-नानोमोलेमियन: हेम तेल वा सीबीडी नैनोमोमुलेन्सको लागि, हेम / सीबीडी तेल उच्च गुणस्तरको खाद्य-ग्रेडको तेलमा मिलाइएको छ। साधारण पौधाको तेल एमसीटी तेल, नारियल तेल, एभोकैडो तेल, जैतून का तेल, फ्लाक्सिसेड तेल, मीठो बादाम तेल र अखरोट तेल हुन्। ई्युसिलिफिक (सर्फैक्टेंट, प्वाइन्ट एजेन्ट, स्टेटिअलाइजर) polysorbate 80, लेसिथिन, क्विला साइपोनिन, सोया लेसिथिन र साबुन छाल सफलतापूर्वक प्रयोग भएको छ। ज्यान्थ गम, पेक्टिन, वा पाटी प्रोटीन रथोलोलोजी र पायस स्थिरतालाई सुधार गर्न थप थप गर्न सकिन्छ।
CO2 निकासी दुई तरिकाहरु मा प्रदर्शन गर्न सकिन्छ: सुपरवाइटिकल र सबकोस्ट्रिकल निकासी। जब CO2 विलायक को रूपमा प्रयोग गरिन्छ, यसमा विभिन्न विशेषताहरू छन् जुन यसको द्रव अवस्थामा निर्भर हुन्छ। उपसर्गिक CO2 को परिभाषित गर्दछ CO2 राज्यमा 5-10 डिग्री सेल्सियस (278.15-283.15 के.के., 47 डिग्री फारेनहाइट) र 800-1500psi को बीचको दबाव (54.43-102.06मैमिटर, 5.51-10.24 मेगावाट) को बीचमा। यस तापमान र दबाव मा, सीओ2 मोटो तरल पदार्थको रूपमा व्यवहार गर्दछ। जब तापमान र दबाबको अवस्था बढ्दै गयो र महत्वपूर्ण तापमान (304.25 केजी, 31.10 डिग्री सेल्सियस, 87.98 डिग्री फाईल) र महत्वपूर्ण दबाब (72.9ैट, 7.39एमपी, 1,071 सेन्सी) पार गर्दछ, CO2 एक ग्यास जस्तो कन्टेनरमा विस्तार गर्दछ तर यसको साथ घनत्व जस्तै कि तरल। यो सुपर कार्बनिक डाइअक्साइड (एसओसी) को रूपमा चिनिन्छ2 वा SC-CO2))।
उपसर्गिक CO2 निकासी प्रयोग कम तापमान र कम दबाव र यसैले बढी समय लाग्छ। उपसर्गिक CO2 निकासीले सानो उपज दिन्छ र केहि टिका र तेलहरू राख्न सक्दछ। सुपरक्रासंगिक CO को लागि2 निकासी, उच्च तापमान र उच्च दबाव लागू गरिन्छ, जो ट्रेपहरू र अन्य फाइटोकेमिकललाई क्षति पार्न सक्छ। सुपरक्रासंगिक CO को लागि2 निष्कर्ष, एक डाउनस्ट्रीम प्रक्रिया – जाडोको रूपमा चिनिन्छ – लिपिड र क्लोरोफिल जस्ता अनावश्यक यौगिहरु हटाउन आवश्यक छ। सर्जनिस चरणको समयमा, इथेनॉलमा कच्ची निकाय खाली छानबिनोइनडिड्स र खुर्सानी निकाल्दा अन्य byproducts को निकासी निकालन को समयमा अलग।